Kenya oo ku hanjabtay cunaqabatayn ay kuso rogto somaaliya – Radio Daljir
Kenya oo ku hanjabtay cunaqabatayn ay kuso rogto somaaliya
Febraayo 22, 2019 7:29 b 0
Wasiirka Arrimaha Dibbada Kenya Monica Juma ayaa ka dalabtay dowlada Soomaaliya inay sharaxaad buuxda ka bixiso khilaafka labada dal ee salka u ah muranka ku saabsan qeybo kamid ah badweynta Hindiya.
Monica Juma oo goordhow hadashay ayaa sheegtay in laga yaabo in dowladeedu ay cunoqabatayn ku soo rogto dalka Soomaaliya haddii aysan dowlada Soomaaliya jawaabteeda aysan dowlada Kenya ku qancin.
Balse Monica Juma ayaan sheegin nooca cunoqabataynta laga yaabo inay ku soo rogto dowlada Kenya dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Monica Juma ayaa xustay in jawaabta dowlada Soomaaliya ay tahay in ay ku soo darto cudurdaar ay ka bixiso talaabadii ay dowlada Soomaaliya ku dhaqaaqday.
“Hal sentimitir oo kamid ah dhulka Kenya uma ogolaan doono wadan kale.”ayay tiri Monica sida lagu daabcay wargeyska The Standard.
Kenya ayaa sheegtay in buqcad ka mid ah dhulkeeda sida ay sheeganayso aysan u oggolaan doonin in uu u gacan galo dowlada Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma ayaa ku tilmaantay tallaabada ay dowlada Soomaaliya qaaday inay tahay mid waddo qaldan ku socoto taasoo ah badda ay sheeganayso dowlada Kenya inay leedahay.
Dowlada Kenya ayaa ka hadashay maalmo kadib khilaafka kala dhexeeya dowlada Soomaaliya kadib markii ay dowlada Soomaaliya jawaab ka bixisay eedeymaha loo soo jeediyay.
Hase ahaatee dowlada Kenya ayaa weli ku adkeysanaysa in dowlada Soomaaliya ay ku soo dartay qeybo kamid ah baddii la geeyay maxkamada caalamiga ah ee adduunka.
Kenya ayaa sheegtay in dowlada Soomaaliya ay soo bandhigtey in tartan loo galo dhul badeed ka mid ah baddii dacwadeeda socotay taasoo dowlada Soomaaliyana ay beenisay.
“Balokyada 230, 231, 232 iyo 233 ayay dowlada Soomaaliya soo bandhigtey xaraash ah in sahamin lagu sameeyo taasoo ciddiiku guuleysatana ay bilaabayso howlaha sahaminta sanadka 2020.”ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay dowlada Kenya.
Si kasta ha ahaatee warkan ka soo yeeray Wasiirka Arrimaha Dibbada Kenya Juma ayaa ah mid ka duwan guddi uu ku dhowaaqay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta maanta kadib markii uu la kulmay Golihiisa Wasiirada.
Ciidamadda dowladda iyo alshabaab oo shabeelaha hoose ku dagaalamay